NDITHINTELE IQHOSHA LESNOOZE IVEKI, KWAYE YINTO EYENZEKILEYO | UTHINTELO - IMPILO
Ndithintele iQhosha leSnooze iVeki, kwaye yile yenzekileyo
Ndinobudlelwane obungenampilo kunye neqhosha lokusnuza. Njengakwi, ndibethe amaxesha ama-2 ukuya kwayi-3 rhoqo kusasa… kwii-alam ezimbini ezihlukeneyo, ezimileyo (enye kwikloko yedijithali yesiqhelo, enye kwi-iPhone yam kuba ikati yam ihlala inyathela kumaqhosha ewotshi yam yedijithali ngexesha lokuzama ukundivusa ebusuku). Nje ukuba ndiphume ebhedini, ndingumntu onencasa ekuseni: Ndihamba ndibaleka, ndenze isidlo sakusasa, kwaye ndilawule ukungazikhuphi konke ngexesha lomsebenzi nge-9 AM. Kodwa xa kuziwa ekuphumeni ngokwenyama ebhedini, ndifana noSisyphus kunye nelo litye. (Yenza u-2017 unyaka wakho ngokuthatha uxanduva lwempilo yakho kwaye utsiba-ukuqala ukwehla kobunzima bakho nge- Uthintelo ikhalenda kunye nesicwangciso sezempilo !)
Kutshanje, le ndlela yam yokudinwa idinisayo yaqala ukulahla umgca wexesha lam lasekuseni, kwaye ndandizishiya iimbaleki kamva nasemva koko. Ayilunganga kwaphela into yokuba ilanga liphuma kamva ekwindla, kodwa andenzi njalo. Kwafuneka ndizibuze, ingaba yonke le nto yokusnuza kwam yenza ukuba kube nzima ukuba ndiphume ngomnyango? Kuthekani ukuba ndibeka nje ialam yam ngexesha endifuna ngokwenene ukuvuka ngalo, endaweni yesiqingatha seyure kwangaphambili?
Izifundo ziyaqinisekisa loo groggy, ayinakuphuma-ebhedini imeko uninzi lwethu luyazi kakuhle. Kungenxa yokuba njengoko sibuyela ebuthongweni emva kwealam # 1, singena kumjikelo omtsha wokulala oza kuphazamiseka. Kwaye nangona uninzi lwethu seluyazi kakade le nto, sisaxhomekeke koko 'kwimizuzu eli-10 nje' qho kusasa. Ndithathe isigqibo sokuba lixesha lokuba ndibambe umkhwa kunye nokuthintela iqhosha lokusnuza kwiveki epheleleyo ukuze ndibone ukuba ngenene wenze umahluko. Nantsi indlela eya ngayo.
Kuqala ndiye ndacinga ngokurhoxisa lonke uvavanyo.
Nangona ndibeka ialam yam kamva kwiakhawunti kuyo yonke imeko engalambisi, kwakungumzabalazo wokuzigcina ndityhala eli qhosha. Xa ialam yam yaphelayo ngo-6: 15 AM, ndaye ndalala nje kangangemizuzu embalwa, ndanyanzelisa amehlo am ukuba ahlale evulekile, ngaphambi kokwenza intshukumo enkulu yokuhlala eminye imizuzu emi-5. Ndandisahleli ebhedini, kodwa ndandivukile, kwaye ndakujonga njengophumeleleyo oko.
Ndichithe ixesha elininzi kwifowuni yam.
Ngaba bendithatha indawo yomkhwa ongafanelekanga ngomnye? Ngaphambi kokuba ndizivumele ukuba ndiphume ebhedini, ndizifumene ndikhangela i-imeyile kunye ne-Facebook ixesha elide kunesiqhelo kusuku ngalunye lolu vavanyo. Ndiqaphele ukuba kukuzibekel 'amangomso izinto, kodwa kwakubanda kakhulu ngaphandle kwezikhuselo kwaye ukufudumala kumnandi kakhulu. Kwaye ikati iyaxhuma.
Xa ekugqibeleni ndandiphakamile, ndahamba ngokukhawuleza.
zeziphi izihlangu ezifanelekileyo zokuma imini yonke
Khange ndibenexesha lokuba kuthathe ixesha elingakanani ukuba nditshintshe ndinxibe iimpahla zam zokuzilolonga kwaye ndiphume emnyango xa kuthelekiswa neentsuku zangaphambi kokuba snoozy, kodwa ndicinga ukuba ndihambe ngokukhawuleza xa sele ndiphumile ebhedini. Mhlawumbi ixesha lokuhlala-kwifowuni-yam lalungisa ingqondo yam ukuba ihambe ngokutshintsha, ukuxubha amazinyo, kunye nokufaka izihlangu zam ngexesha elifanelekileyo. Kodwa nokuba siyintoni na isizathu, ndishiye intsasa nganye ibaleke kule veki ngeshedyuli kunokuba ibe yimizuzu emi-5 ukuya kweli-10 emva kwexesha.
Nyani ndahlala phantsi ndatya isidlo sakusasa.
Ngokwesiqhelo mna dibanisa i-smoothie kwaye uyisele ngelixa usenza i-cosmetic, okanye ifosholo yamaqanda emlonyeni wam ngelixa umi kwaye uskrolela kwi-Instagram feed yam. Kodwa imizuzu embalwa endiyigcinileyo indivumele ukuba ndenze isidlo sam sakusasa nditsale isitulo sasekhitshini ndiyitye, nayo. Ngenye intsasa ndade ndafunda incwadi kunye ne-oatmeal kunye nekofu, kwaye ndaziqinisekisa ukuba zincinci izinto ezinje ezinokundigcina ndingaphinde ndonwabe.
Ndahamba ndisiya emsebenzini rhoqo.
Ndihlala malunga ne-mile ukusuka e-ofisini yam, kwaye ndihlala ndihamba kathathu ngeveki, kodwa ngamanye amaxesha umkhwa wam wokozela unefuthe elibi, elingandishiyi xesha lokuhamba ndize ndisebenze ngexesha. Xa ndiyekile ukusnuza, ndongeze usuku lokuhamba. Andinayo iFitbit, kodwa ndicinga ukuba ndiza kuba yiyo kumiswe ngala manyathelo ongezelelweyo ukuba ndenzile.
Ndisayikhumbula iqhosha lokusnuza yonke imihla.
Kwakukho ixesha elifutshane ngoLwesithathu, uSuku 3, apho ndaziva ndinamandla kwaye ndikulungele ukuhamba kanye emva kokuvuka. Ndacinga ukuba mhlawumbi ndophule umkhwa wam ombi, kodwa ufike ngoLwesine ndibuyile kwibhasi yomzabalazo. Kungenzeka ukuba imisebenzi yangokuhlwa kunye nexesha lokulala lifakwe kummahluko wamandla endiziva, kodwa andinakuqiniseka. Kungenzeka ukuba ndingumntu nje.
Isiphetho sam: Nangona ndigcine ixesha ekuseni ngokungalali, bekungonelanga ukutshintsha ngokupheleleyo iindlela zam. Ngentsasa yangoMvulo olandelayo ndisaya kubethisa — kodwa kube kanye endaweni yesithathu. Amanyathelo omntwana?
UTia Mowry, 42, Wamkela iiGrey zakhe eziGrey ngenxa yokuba Ukukhula esiMdala kuyintsikelelo
Ngaba iingcongconi zingasasaza i-COVID-19? Zithini iingcali ezifuna ukuba wazi ngaphambi kwehlobo
Izinto ezili-9 Akukho mntu wakhe wakuxelela malunga nokuTshintshwa kweKnee
Izinto ezi-7 ongazange wazazi malunga nokuthimla
Ukutya okutyayo imifuno okunje ngokugcwalisa njengenyama
Intsingiselo yokomoya yama-555
Ngaba ii-lymph node zakho zidumbile nge-covid
Eyona khrimu intamo ye-2020 yesikhumba ekhuthazwayo
Ngaba ioyile yekhokhonathi ingasetyenziswa njenge-lube
wenza ntoni i-tourmaline emnyama